घर अफ्रिकी फुटबल स्टोरीहरू नाइजेरियन फुटबल खेलाडीहरू शमूएल Chukwueze बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य
हाम्रो शमूएल Chukwueze जीवनी तपाईंलाई उसको बचपन कहानी, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार, प्रेमिका / पत्नी हुन कारहरु, नेट वर्थ, जीवन शैली र व्यक्तिगत जीवनको बारे तथ्य बताउँछ।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा, यो नाइजेरियाका पेशेवर फुटबलरहरूको जीवन कहानी हो। यो उनको बाल्यकालदेखि सुरु भयो, जब उनी प्रसिद्ध भए। तपाईको आत्मकथा भूखलाई छेक्न यहाँ वयस्क ग्यालेरीको बाल्यकाल छ - शमूएल चुकवेजको बायोको एक सारांश।
प्रारम्भिक जीवन र शमूएल Chukwueze को उदय।
हो, सबैलाई थाहा छ उसको प्रत्यक्ष dribbling र संकल्प को बारे मा। जहाँसम्म, केवल केहि थोरैले शमूएल चुकवेजको जीवनीको हाम्रो संस्करणलाई विचार गर्छन् जुन धेरै रोचक छ। अब, थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
शमूएल Chukwueze बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - पारिवारिक पृष्ठभूमि र प्रारम्भिक जीवन
जीवनी सुरु गर्नेहरूको लागि, उहाँ उपनाम लिनुहुन्छ "सामु"। शमूएल Chimerenka Chukwueze जन्म मे १ 22 1999। को २२ औं दिनमा नाइजेरियाको अबिया राज्यको उमुहिया शहरमा भएको थियो। उहाँ आफ्नो सानो ज्ञात आमा र बुबाको लागि जन्मेका तीन छोरा मध्ये पहिलो हुनुहुन्छ।
नाइजेरियाको पश्चिमी अफ्रिकी परिवारको मूलको इग्बो जातीय जातिको उम्वहिया सहरमा उसको जन्मस्थलमा मध्यमवर्गीय पारिवारिक पृष्ठभूमिमा हुर्केका थिए जहाँ उनी आफ्नो कान्छो भाइ र बहिनीसँग हुर्केका थिए।
जवान शमूएल चुक्वेज नाइजेरियाको उहुआहिया शहरमा हुर्केका थिए।
उहुआहियामा हुर्किएकी, युवा Chukwueze केवल years वर्षको थियो जब ऊ आफ्नो बाल्यावस्थाको आइडल हेरेर फुटबलको प्रेममा परिणत भयो। जे जे जे ओकोचा टेलिभिज्ड खेलहरूमा तारकीय कौशल खेल्दै र प्रदर्शन गर्दै। जबकि Chukwueze यो थियो, उनले भविष्यमा आफ्नो मूर्ति र अन्य फुटबल ग्रेट सँगै खेल्ने कल्पना गरे।
शमूएल Chukwueze बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - शिक्षा र क्यारियर बिल्डअप
वर्ष बित्दै जाँदा, Chukwueze दिन प्रति दिन फुटबल खेलमा धेरै लगानी भयो, यो गतिविधि जुन उनले कलेज को गाउँ उमुहिया र पछि इभान्जेल माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गर्न मिल्ने प्रयास गरे। युवा पागल फुटबल खेलाडीले वर्षौंपछि स्वीकार्दछन् कि उसले मन नचाहे पनि फुटबल खेल्ने वेदीमा अध्ययन गर्ने त्याग गर्यो। उसको अनुसार:
"म एक राम्रो विद्यार्थी थिए, तर फुटबलप्रतिको मेरो प्रेमले अन्ततः मेरो ध्यान केन्द्रित गर्यो, जबकि पढ्नको लागि मेरो रुचि बिस्तारै घट्दै गयो।"
विकास चुुकुजेका आमाबुबा र काकाको साथ राम्रो थिएन, जसले उहाँलाई अध्ययनमा केन्द्रित गर्न सक्दो प्रयास गरे। वास्तवमा उनीहरू एक पटक चुकवेजेको जुत्ता र तालिम किटहरू जलाउँथे जुन उनीहरू गम्भीर थिए तर युवा केटा पहिले नै फुटबल खेल्न प्रतिबद्ध भइसकेका थिए।
चुकुवेजका जुत्ताहरू जलाउनु उनको नजिकको फुटबल खेल्नबाट रोक्न पर्याप्त थिएन।
शमूएल Chukwueze बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - प्रारम्भिक क्यारियर लाइफ
चुकुवेजका आमाबुबाले आफ्नो फुटबल स .्लग्नताको लागि असहमति जनाए पनि, बालकले एकेडेमीमा खेल्न छोडे जुन उनले सोचे कि उनी प्रोफेशनल फुटबलर बन्ने सपनाको अनुभूतिमा द्रुत गति लिन सक्दछन्। एकेडेमीहरूको कुरा गर्नुहोस्, Chukwueze पहिलो भविष्य फ्युचर होप U-8 र U-10 टोलीको साथ शुरू भयो जब उनी हाई स्कूलको विद्यार्थी बने।
न्यु जेनेरेशन एकेडेमीको साथ छोटो तालिम लिन गएको फुटबल प्रोडिजी पछि २०१२ मा डायमंड फुटबल एकेडेमीमा सामेल भयो र प्रतिस्पर्धी वि become्गर बन्न मोल्ड गरियो। यो डायमंड एकेडेमीमा थियो जसले चुक्वेजलाई आफ्नो टीमको एक हिस्सा बनायो जुन २०१ Portuguese पुर्तगाली युवा इबर कप प्रतियोगिताको लागि थियो जुन उनीहरूले चुक्वेजलाई जितेका थिए प्रतिस्पर्धाको सर्वाधिक गोल स्कोरर।
२०१ youth युवा इबर कप टूर्नामेन्ट डायमंड एकेडेमी टीमले जितेको थियो र Chukueze सर्वाधिक गोल स्कोरकर्ताको रूपमा देखा पर्‍यो।
शमूएल Chukwueze बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - सडकमा फेम स्टोरी
दुई बर्ष पछि, Chukwueze आफ्नो क्यारियर आकांक्षाहरु मा एक महत्वपूर्ण मोड मा पुगे जब उनले नाइजेरियाली टीम मा एक स्थान कमाए जसले २०१ile फिली U2015 वर्ल्ड कप चिलीमा जित्यो, यो घटना युवा युवाहरु जस्तै थियो। ट्रेंट अलेक्जेंडर-एर्नोल्ड, एडर मिलिताओ र क्रिश्चियन पुलिस। उनको विश्व कप वीरगति पछि, Chukwueze धेरै यूरोपीयन टीमहरु लाई चासो आकर्षित गर्न थाले।
१ 16 बर्षीया Chukwueze नाइजेरियाली टीमको एक हिस्सा थियो जसले चिलीमा २०१ 2015 फिफा U17 वर्ल्ड कप जित्यो।
उनले साल्जबर्ग, पीएसजी, पोर्तो जस्ता भ्रमण गरे जबकि आर्सेनल उनीसँग उनको युवा प्रणालीमा समाहित हुने धेरै नजिक भए। जे होस्, जवानले भिलारियलसँग प्रतिबद्धता गरे जुन उनी र डायमंड फुटबल एकेडेमीका लागि उत्तम सम्झौता थियो। भिलारियलमा पुगेपछि, चुक्वेजले महिनौंसम्म भाषा अवरोधहरूसँग संघर्ष गरे र स्पेनी खानाको अभ्यास गरे तर चुनौतिहरूले उनलाई विलार्रियल क्लबको जुवेनिल ए टीममा प्रभाव पार्नबाट विचलित हुन दिएन।
“म आइपुग्दा मलाई के खुवाइयो भनेर मलाई कुनै बिचार थिएन, भिलारियल। मासु ... यो जताततै रगत थियो! मलाई स्पेनी भाषा बोल्नको सपना देख्न पनि सक्दिनथें। ”
Chukwueze Villarreal मा आफ्नो शुरुआती दिनहरु सम्झन्छ।
शमूएल Chukwueze बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - फेम स्टोरीमा उठाउनुहोस्
Chukwueze अप्रिल २०१ in मा Villarreal को लागी आफ्नो वरिष्ठ पदार्पण गरेको धेरै समय पछि, उनी सोही वर्ष सेप्टेम्बरमा क्लबको पहिलो टीम टोलीमा देखा पर्‍यो र राम्रो फिनिशिंगको साथ आफूलाई एक उत्कृष्ट dribbler को रूपमा स्थापित गर्न को लागी गए कि उनी फुटबल कथासँग तुलना गरे। Arjen Robben.
शमूएल Chukwueze आफ्नो प्रत्यक्ष dribblings र दृढ संकल्प को लागि प्रसिद्ध छ।
२०१uk अफ्रिकी कप अफ नेशन्समा कांस्य जित्ने नाइजेरियाली टोलीको हिस्सा बन्ने बित्तिकै एक वर्ष पछि चुक्वेजले सफलता हासिल गरे। यूईएफए उसलाई पनि त्यस वर्ष फुटबलको दुनियामा हेर्न listed० जना युवा मध्ये एकको रूपमा सूचीबद्ध गरे। बाँकी, तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो.
शमूएल Chukwueze बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - सम्बन्धी जीवन तथ्यहरू
शमूएल Chukwueze प्रेम जीवन मा बढ्दै, विger्गर यो बायो लेख्ने समयमा एकल हुन सक्छ। यो धेरै हदसम्म उहाँ कुनै स्प्यानिश वा नाइजेरियाको सुन्दरता संग भेटिएन भन्ने तथ्यले हो कि उहाँ आफ्नो प्रेमिका को रूप मा सम्मान गर्न सक्नुहुन्छ।
युवा, सफल र मेहनती शमूएल Chukwueze यो जीवनी लेख्दा एकल छ।
कारणहरू, किन Chukwueze कुनै ज्ञात प्रेमिका छ, यस तथ्यसँग जडान गर्न सकिँदैन कि उहाँसँग शीर्ष उडान फूटबल खेल्ने केही महिनाको अनुभव छ। त्यस्तै, उसले आफ्नो पुरानो क्यारियरलाई अझ उचाइमा पुग्न धेरै समय र प्रयास लगानी गर्दैछ।
शमूएल Chukwueze बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - पारिवारिक जीवन तथ्य
परिवार Chukwueze को लागी मात्र महत्त्वपूर्ण छैन, यो विger्गरमा सबैकुरा हो। हामी तपाइँलाई चुक्वेजका परिवारका सदस्यहरूको बारेमा तथ्यहरू ल्याउँदछौं र साथसाथै उनको पुर्खाको उपलब्ध रेकर्ड पनि रूपरेखा दिन्छौं।
शमूएल Chukwueze बुबा र आमाको बारेमा: यस बायो लेख्दा चुकवेजका अभिभावकहरू उनीहरूको नामबाट चिनिदैनन् जबकि उनीहरूको व्यक्तिगत पारिवारिक जराको बारेमा धेरै ज्ञात हुँदैन। यद्यपि, विger्गरले एक पटक भन्यो कि उसको बुबा परमेश्वरको सेवक हुनुहुन्छ जबकि उहाँकी आमा प्रारम्भिक जीवनदेखि नै नर्स भइन्। दुबै बुबाआमा सुरुमै चुक्वेजको फुटबल प्रयासको बिरूद्ध थिए तर २०१ 2013 पुर्तगाली युवा इबर कप प्रतियोगिताको लागि पोर्तुगाल जानु अघि उनलाई आशिष् दिए बाहेक अरू कुनै विकल्प थिएन।
आमा र उनका पहिलो छोराले न्यानो तस्विरमा जो उनीहरूका मायालु सम्बन्धहरूको खण्डहरू बोल्दछन्।
शमूएल Chukwueze भाई बहिनीहरू र आफन्तहरूको बारेमा: Chukwueze तीन आमा मध्ये आमाको जन्म तीन बच्चाहरु मध्ये पहिलो हो। उसको कान्छी बहिनी र भाइ छ जसको बारेमा लेखिएको समयमा थोरै मात्र चिनिएको छ। न त उनी आफ्नो पुर्खाको रेकर्ड छन् खास गरी उसको बुवा हजुरबा हजुरआमा र हजुरआमा र हजुरआमाको। त्यस्तै चुकवुजेका काका, काकी र काका-मामाका बारे अज्ञात छन् जबकि उनका भतिजा र भतिजालाई लेख्नका लागि चिन्न सकेको छैन।
शमूएल Chukwueze बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - व्यक्तिगत जीवन तथ्य
डरवाइंग डिफेन्डरहरूको लागि चुक्वेज अन-पिच पेन्सेन्टबाट टाढा, उहाँसँग एक सम्भाव्य आउट फिल्ड व्यक्तित्व छ जुन उहाँलाई पृथ्वीमा एक मेहनती, सकारात्मक र सजिलो मान्छेको रूपमा चित्रण गर्दछ। Chukwueze व्यक्तित्व थप उसको निजी र व्यक्तिगत जीवनको बारेमा अधिक प्रकट नगर्ने उहाँको स्वभाव हो।
मेष राशिफल साइन द्वारा निर्देशित विger्गरले धेरै गतिविधिहरू संलग्न गर्दछ जुन आफ्नो रुचि र शौकको लागि पार गर्दछ। गतिविधिहरूमा भिडियो गेमहरू खेल्न, संगीत सुन्नका साथै परिवार र साथीहरूसँग राम्रो समय बिताउनु समावेश छ।
संगीत Chukwueze आत्माको लागि खाना हो। उहाँ यहाँ डु boat्गामा सवार भएर संगीतको आनन्द लिदै चित्रण गरिएको छ।
शमूएल Chukwueze बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - जीवन शैली तथ्य
शमूएल चुकवेजले कसरी आफ्नो पैसा कमाउँछन् र खर्च गर्छन् भन्ने सम्बन्धमा उसको कुल सम्पत्ति लेखनको क्रममा समीक्षाको अधीनमा छ तर उनको € करोड €० लाखको मूल्य छ र भेलारियलको पहिलो टीममा खेल्नको लागि तलब र ज्यालामा राम्रो कमाउँछ।
त्यस्तै, विger्गरले एक विलासी जीवन शैली बिताउँछ जुन उसको खर्च गर्ने बानीबाट स्पष्ट हुन्छ। जे होस् Chukwueze बसोबास गरेको अपार्टमेन्ट वा घरको मूल्य अझै अज्ञात छ, उनको कारहरु संग्रह मा एक विदेशी माज़दा MX-5 मियाटा रूपान्तरण सवारीको गर्व गर्दछ जुन उसले स्पेनको वरिपरिको बाटो खोज्न प्रयोग गर्दछ।
शमूएल Chukwueze आफ्नो माज्दा MX-5 मियता परिवर्तनीय कारमा शटको लागि प्रस्तुत गर्दै।
शमूएल Chukwueze बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - अनियमित तथ्यहरू
हाम्रो शमूएल Chukwueze बाल्यकाल कहानी र जीवनी समाप्त गर्न, यहाँ Winger को बारे मा कम ज्ञात वा अनटल्ड तथ्यहरू छन्।
धर्म:शमूएल चुक्वेज एक इसाई परिवारमा जन्मेका थिए र उनको विश्वास इसाई विश्वासको सिद्धान्त अनुरूप हुर्केका थिए। यद्यपि साक्षात्कारको क्रममा यो धार्मिक हुँदैन, उनी एक गैर कट्टरपन्थी क्रिश्चियन होईन भन्ने विश्वास गरिन्छ।
ट्याटूहरू: Ger फिट, inches इन्चको उचाईसहितको वि्गरसँग यस जीवनी लेख्दा कुनै शरीर कला हुँदैन। जहाँसम्म, उसले विश्वको सर्वश्रेष्ठ फुटबलरहरूको बीचमा स्थापित गर्ने बित्तिकै ट्याटू हुने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्दैछ।
फोटो प्रमाण: शमूएल चुकवेजसँग अहिलेसम्म कुनै ट्याटु छैन।
धुम्रपान र मदिरा: शमूएल चुकविजेका आमा बुबाले उनलाई पिउन र धुम्रपानबाट अलग राखेका छन्। ऊ कहिल्यै क्यामेरामा रक्सी वा धुम्रपानमा कब्जा गरिएको छैन। ऊ कहाँबाट आएको हो भन्ने विचारमा, यो निश्चित छ कि विger्गरले हानिकारक कार्यमा संलग्न हुने छैन जुन उसको क्यारियरलाई जोखिममा पार्न सक्छ।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: को लागि धन्यवाद पढ्ने हाम्रो शमूएल चुकुउज बालबालिकाको हत्या। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाइँले केहि राम्रो देख्नुहुन्न भने, कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी तपाईका विचारहरुलाई सँधै मूल्य दिन्छौं र सम्मान गर्छौं।